के अब युद्धको मैदानमा मानवको साटो मेशिनको प्रयोग होला त ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
के अब युद्धको मैदानमा मानवको साटो मेशिनको प्रयोग होला त ?
बीबीसी । आर्टिफिशियल इन्टेलिजन एआईको बदलिदो प्रकृतिले युद्ध र रक्षासहित मानव समाजका सबै क्षेत्र प्रभावित रहनेछन्। भविष्यमा हुने युद्धमाथि एआईको कस्तो असर देखिएला भन्ने विषयले विश्वकै आम निर्माता, वकिल र सैन्य अधिकारीका लागि चिन्ताको विषय बनिसकेको छ।
कुनै पनि सेनामा एआईको प्रयोग यी मुख्य काममा गर्न सकिन्छ। ती हुन्, रासन तथा आपूर्ति प्रवर्धद्ध, डाटा एनालाइसिस, मुख्य जानकारी जुटाउन, साइबर अपरेसन र हतियार वा स्वायत्त सिस्टम ।
रासन आपूर्ति तथा डाटा एनालाइसिसमा एआईको प्रयोग ज्यादा नोक्सानदायि नहुने देखिन्छ । किनकी असैन्य क्षेत्रमा पहिलै यसमा धेरै काम भइसकेका छन्।
केही विशेषज्ञका अनुसार साइबर हमला रोक्नका लागि एआईको प्रयोग एक दमै आवश्यक रहेको देखिन्छ। किनकी एआईको प्रयोगबाट साइबर हमलालाई सजिलै पक्राउ गर्न सकिन्छ।
माथि बताइएका मध्ये एआईको प्रयोग सबै भन्दा विवादित रहेको छ, हतियारको स्वायत्त सिस्टमको तैनाथ गर्नु । हतियारको स्वायत्त सिस्टमलाई कुन तरिकाले सम्झाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले विवाद देखिएको छ। तर माथिल्लो निकाएका अनुसार उक्त सिस्टमबाट जुन हतियार आउने जाने गर्छन्, जसले गर्दा आफै काम गर्न सहज हुन्छ। र त्यसका लागि मानवको समेत अधिक जरुरत हुँदैन्। यी अतियारलाई किलर रोबटको नाम समेत दिइएको छ।
हतियारको यो सिस्टमलाई मिसाई डिफेन्स सिस्टम र साना साना ड्रोनका रुपमा प्रयोग गरिन सकिन्छ। यी हतियार युद्धमा तथा मानव अस्तित्व समाप्त गर्नका लागि प्रयोग गर्ने भएका कारण यसबाट एक नयाँ शब्द आविष्कार भएको छ। जसलाई लिथिल स्वायत्त हतियार प्रणाली भनिन्छ।
हतियारको यस घाटक स्वायत्त सिस्टममाथि पछिल्लो समय निकै चर्चा भएको छ। यी हतियारको निर्माणलाई रोक्नका लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान समेत चलाइएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रमा पनि यी हतियारको प्रयोगमाथि पछिल्लो वर्ष चर्चा भएको थियो।
यी हतियारको प्रयोगमाथि रोक लगाउन माग गर्नेले दुई कारण बताएका छन्, पहिलो कानुन र दोस्रो नैतिक ।
जहाँ कानुनी कारणको सवाल छ त उहाँ जिम्मेवारीमाथि निर्भर गर्छ। हालै रहेको अन्तर्राष्ट्रिय काुनन र युद्धको नियमका अनुसार यदी कोही सैनिकले युद्धका क्रममा कुनै प्रकारको अपराध गर्छ भने उसको जिम्मेवारी सैनिकमाथि वा यसका अधिकारीमाथि हुन्छ। तर यदी कुनै किसिमको मेसिन मानव हमला गर्न छोडिदिदा वा मेसिनले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न लाग्यो भने त्यहाँ जिम्मेवारीको अभाव पैदा हुन्छ। युद्धको मैदानमा हुने कुनै प्रकारको अपराध वा अन्य अनैतिक गतिविधिका लागि एउटा मेसिनलाई जिम्मेवारी कसरी ठहर्याउन सकिन्छ? यदी यो सवाल छ जसको सटिक जवाफ अहिलेसम्म कसैसँग पनि छैन्। त्यसैले यी हतियारको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन जोडदार माग भइरहेका छन्।
त्यस्तै दोस्रो नैतिक सवालको कुरा गर्दा युद्धको मैदानमा एक मानवले दोस्रो मावनको हत्या गर्न सक्छ तर एआईको प्रयोगबाट एक मेसिनले जब मानवको हत्या गर्छ भने त्यो मानवको गरिमा विरुद्ध हुने बताइएको छ।
विस्तारै यी घातक हतियारले मानिसमाथि नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै यी दुई कारणसहित अभियान कर्ताले हतियारमा एआईको प्रयोग गर्न रोक लगाइने बताउँदै आएका छन्। यी तमाम चर्चा र बहसले एआईको प्रयोग भएका हतियार युद्ध मैदानमा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रष्टीकरण दिएका छन्।
तर यी विवादका बाबजुद पनि विश्वका शक्तिशाली सैन्य शक्तिले एआई सिस्टमको मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै आएका छन्। अब यही देख्न बाँकी छ की यो कति छिटो सम्भव हुन्छ ? तर यो भने निश्चित छ की अब हुने युद्धको रुप पुर्ण रुपमा बदलिनेवाला छ।